Fisandohana ho Bianco :: Nosamborina ny zandary adjidà-sefo iray • AoRaha
Fisandohana ho Bianco Nosamborina ny zandary adjidà-sefo iray
Noraisim-potsiny indray ny zandary adjidà-sefo iray miasa eny amin’ny Toby Ratsimandrava, afak’omaly, tany Moramanga. Voarohirohy nisandoka ho mpiasan’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly izy no sady nisoloky vola iray tapitrisa ariary. Voalaza ho mbola saika haka vola dimy tapitrisa ariary io zandary io no izao tra-tehaka izao.
“Nisy angom-baovao milaza ny fisian’ireo olona miso­loky sy misandoka ho mpiasan’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na Bianco. Naka vola tamin’olona izy ireo noho ny raharaha iray. Nanao famotorana izahay vantany vao naheno ny vaovao. Nivoatra ny toe-draharaha, andro vitsy taty aoriana. Niafara tamin’ny fisamborana an’ilay zandary”, hoy ny fanazavana azo avy amin’ny Zandarimaria any Moramanga.
Misy vehivavy mpitovo iray sy lehilahy iray hafa ihany koa isan’ireo voampanga tamin’ireo fandikan-keloka ireo. Samy efa voasambotra avokoa izy ireo, miaraka amin’ilay zandary. Voatazona ao amin’ny tobin’ny Zandarimaria any Moramanga izy ireo. Manamboninahitra avy ao amin’ny Vondron-tobim-pileovana Alaotra Mangoro no fantatra fa
mitarika ny famotorana an’ireo voampanga ireo, nanomboka afak’omaly. Tokony ho natolotra ny Fitsarana, omaly, izy telo araka ny loharanom-baovao, saingy tsy tao an-toerana ny Tonia mpampanoa lalàna fa namonjy lanonana fametrahana ny filohan’ny Fitsarana ambaratonga ambony tany Toamasina. Raha tsy misy ny fiovana dia anio no voatondro hanolorana ny raharaha ny Fitsarana ao Moramanga.
Dinika momba an’ireo nosy malagasy :: Hatolotra ny Filoha anio ireo fehin-kevitra voangona
Fanarenana ny Rovan’Antananarivo :: Mandroso tsikelikely ny asa fanamboarana eny Manjakamiadana